စာတစ္လုံးမွ မတတ္ပဲ ႏွစ္ေက်ာ့ျပန္ ဘီလီယံနာသူေဌးႀကီး ျဖစ္လာသူ (႐ုပ္သံ) by popolay.com
စာတစ်လုံးမှ မတတ်ပဲ နှစ်ကျော့ပြန် ဘီလီယံနာသူဌေးကြီး ဖြစ်လာသူ (ရုပ်သံ)
05 Sep 2019 4,205 Views
ဘီလီယံနာကြီး သူဌေးကြီး တစ်ယောက်ဖြစ်ဖို့ဆိုရင် ဘာတွေလိုအပ်တယ်လို့ ယူဆထားကြပါသလဲ..? ချမ်းသာတဲ့ ဘက်ဂရောင်းအသိုင်းအဝိုင်း ရှိဖို့လိုပါသလား..? MBA, PhD စတဲ့ အဆင့်မြင့်ပညာတွေ ဘွဲ့တွေ ရထားဖို့ လိုအပ်ပါသလား..?
အင်္ဂလန်နိုင်ငံက စွန့်ဦးတီထွင် လုပ်ငန်းရှင် “ဂျပ်ဖ် ပီယာစီ (Jeff Pearce)” ဟာ ဆင်းဆင်းရဲရဲနဲ့ မွေးဖွားလာခဲ့ပြီး စာတစ်လုံးမှလည်း မရေးတတ် မဖတ်တတ်ပဲ ဘီလီယံနာသူဌေးကြီး ဘဝကို နှစ်ကြိမ်တိုင်တိုင် ပြန်ရအောင် စွမ်းဆောင်နိုင်ခဲ့တဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။
တစ်ကယ်တော့ သူ့ရဲ့နာမည်အရင်းက “Jeff” မဟုတ်ခဲ့ပါဘူး။ သူ့ရဲ့ ပထမနာမည်ကို သူကိုယ်တိုင် စာလုံးမပေါင်းတတ်တဲ့အတွက် လွယ်ကူအောင် “Jeff” လို့ မိဘတွေက ပြန်ပြောင်းပေးခဲ့ရတာပါ။
“Jeff” ကို ၁၉၅၀ ခုနှစ်များက အင်္ဂလန်နိုင်ငံ လီဗာပူးလ်မှာ မွေးဖွားခဲ့ပါတယ်။ သူ့တို့ မိသားစုတွေဟာ အရမ်းကို ဆင်းရဲခဲ့ကြပါတယ်။ “Jeff” ရဲ့ အဖေက တက္ကစီမောင်းသူဖြစ်ပြီး သူရတဲ့ပိုက်ဆံတွေ အားလုံးကို အရက်ဆိုင်မှာပဲ သုံးဖြုန်းပစ်ပါတယ်။ (နောက်ပိုင်းတော့ အမြင်မှန်ရပြီး လိမ္မာသွားပါတယ်) တစ်ခါတစ်ရံ အိမ်က သားသမီးတွေစားစရာမရှိလို့ အမေဖြစ်သူက သူများဆိုင်ကနေ ပေါင်မုန်တွေခိုးပြီး ကျွေးခဲ့ရတဲ့ အချိန်တွေလည်း ရှိခဲ့ဖူးပါတယ်။
Jeff ရဲ့ မိဘများ
“Jeff” ကျောင်းနေတဲ့အရွယ်မှာ စာလုံးဝ မလိုက်နိုင်တာကြောင့် ဆရာဆရာမတွေက သူ့ကို သုံးစားလို့မရတဲ့ ကလေးတစ်ယောက်အဖြစ် သတ်မှတ်ခဲ့ကြပါတယ်။
အမှန်တော့ “Jeff” ဟာ ‘ဒိုင်လက်ခ်စီးယား’ လို့ခေါ်တဲ့ စာလုံးတွေကို မမှတ်မိတတ်တဲ့ မွေးရာပါ စာသင်ရခက်တဲ့ ရောဂါကို ခံစားနေရတဲ့ကလေးဖြစ်ပါတယ်၊ အဲဒီခေတ်ကာလက ဒီရောဂါအကြောင်းကို လူတွေက သိပ်မသိကြသေးပါဘူး။
“Jeff” က စာသင်လို့ မရပေမယ့် အရောင်းအဝယ်ဘက်မှာတော့ ပါရမီရှိတယ်လို့ ဆိုရပါမယ်။ သူ အသက် ၅ နှစ်လောက်ထဲက အမေနဲ့အတူ တစ်အိမ်တက်ဆင်း တံခါးခေါက်ပြီး တပတ်ရစ် အဝတ်ဟောင်းလေးတွေကို လိုက်ရောင်းခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီအတွေ့အကြုံတွေကနေ လူတွေရဲ့ လိုအပ်ချက်ကို သိလာပြီး စီးပွားရှာလို့ရမယ့် နည်းလမ်းတွေကို သူမြင်လာခဲ့ပါတယ်။
သူ့အသက် ၁၄ နှစ်မှာတော့ စာသင်လို့ မရနိုင်တဲ့အတွက် ကျောင်းထုတ်ခံလိုက်ရပါတယ်။ စာဆိုလို့ ကိုယ့်နာမည်တောင် ကိုယ်ပြန်မရေးတတ်တဲ့ အခြေအနေမှာ “Jeff” ဘာလုပ်လို့ လုပ်ရမှန်းမသိ ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် သူ့ရဲ့ရည်မှန်းချက်ကို စိတ်မလျှော့ပဲ ကြိုးစားလာခဲ့ရာ ၁၉၈၃ ခုနှစ်မှာတော့ အဝတ်ထည်ဆိုင် သေးသေးလေးတစ်ခုကို ပိုင်ဆိုင်နေပါပြီ။ သူ့ရဲ့ဆိုင်မှာ လယ်သာဘောင်းဘီရှည်တွေကို စျေးချိုချိုနဲ့ ပြန်ရောင်းတဲ့အတွက် လူကြိုက်များလာခဲ့ပါတယ်။ ဒီအကြောင်းကို သတင်းစာခေါင်းကြီးပိုင်းမှာ သတင်းအနေနဲ့ ဖော်ပြခံခဲ့ရတဲ့အတွက် ပိုပြီး အောင်မြင်လာခဲ့ပါတယ်။
သူ စာရေးဖို့ အခက်အခဲကြုံလာတိုင်း အမေက သူ့ကိုယ်စား ကူညီပြီးရေးပေးခဲ့ပါတယ်။ ဒီလိုနဲ့ သူ့အသက် ၃၀ မပြည့်ခင်မှာပဲ မီလီယံနာ လုပ်ငန်းရှင် တစ်ယောက်ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။
သူ့အသက် ၂၁ နှစ်မှာ မိခင် ဆုံးပါးသွားတဲ့အတွက် သူ့အပေါ် နားအလည်ဆုံးသူ တစ်ယောက် ဆုံရှုံးခဲ့ရပါတယ်။ နောက်ထပ်တစ်နှစ်လောက်အကြာမှာတော့ “ဂျီနာ” ဆိုတဲ့ အမျိုးသမီးနဲ့ ဆုံမိပြီး အိမ်ထောင်ပြုခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီနောက်ပိုင်းမှာတော့ “ဂျီနာ” က သူ့အတွက် သူ့ရဲ့မိခင်လိုပဲ သူ့အပေါ်နားလည်ပြီး သူလိုအပ်တဲ့အခါ သူ့ကိုယ်စား စာတွေရေးပေးတဲ့ လက်တစ်ဖက် ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။
သူ့အသက် ၄၀ ဝန်းကျင်မှာ ကမ္ဘာ့စီးပွားပျက်ကပ်နဲ့ ကြုံလိုက်ရတာကြောင့် လုပ်ငန်းတွေပျက်ပြီး လူမွဲတစ်ယောက် ပြန်ဖြစ်သွားပါတယ်။ အရင်လိုပဲ စျေးထဲမှာ အဝတ်အထည်တွေ ပြန်ရောင်းရတဲ့ဘဝကို ရောက်သွားခဲ့ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် ဘဝကိုအရှုံးမပေးခဲ့ပါဘူး။ ဒီတစ်ခါတော့ စျေးထဲမှာ အထည်ဟောင်းတွေ မရောင်းတော့ပဲ အမျိုးသမီးဝတ် ဖက်ရှင်အဝတ်အထည်တွေကို ရောင်းချခဲ့ပါတယ်။ စျေးကွက်အခြေအနေကို ကောင်းကောင်းနားလည်းပြီး စီးပွားရေးကောင်းလာခဲ့ပေမယ့် ကိုယ်ပိုင်ဆိုင် ပြန်ဖွင့်ဖို့ ငွေကြေး အခက်အခဲဖြစ်နေပါတယ်။
လီဗာပူးလ်မြို့လည်က စီးပွားရေအချက်အချာကျတဲ့နေရာမှာ သူသဘောကျနေတဲ့ ဆိုင်ခန်းတစ်ခန်းကို တွေ့ထားပါတယ်။ အနီးနားမှာလည်း အဝတ်အထည်ရောင်းတဲ့ ဆိုင်ကြီးတွေရှိပါတယ်။ သူ့လက်ထဲမှာ စတာလင်ပေါင် ၅၀၀၀ ပဲရှိပြီး အဲဒီအခန်းကို ငှားနိုင်ဖို့ဆိုရင် သူမှာ နောက်ထပ် ပေါင် ၁၅၀,၀၀ လောက် လိုနေပါတယ်။ ဒီကိစ္စကို ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာ သူ့ရဲ့ အရောင်းမန်နေဂျာ၊ စာရင်းကိုင်နဲ့ ဘဏ်မန်နေဂျာတို့နဲ့ တိုင်ပင်ခဲ့ပါတယ်။
သူတို့အားလုံးက လုပ်ငန်းကြီးတွေနဲ့ ယှဉ်ပြီး မလုပ်ဖို့ ကန့်ကွက်ကြပါတယ်။ ဒီအကြောင်းကို ဘယ်သူနဲ့ပဲ တိုင်ပင်တိုင်ပင် ရှေ့မဆက်ဖို့ပဲ အကြံပေးကြပါတယ်။ နောက်ဆုံးမှာတော့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ယုံကြည်ချက် အပြည့်ရှိနေတဲ့ “Jeff” ကို ယောက္ခမဖြစ်သူက ၂၅ နှစ်လုံးလုံး အကြွေးဆပ်ပြီးမှ ပိုင်ဆိုင်ခဲ့ရတဲ့ သူတို့ရဲ့အိမ်စာချုပ်ကို ယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့ ထုတ်ပေးလိုက်ပါတယ်။ စာချုပ်ကို ဘဏ်မှာအပေါင်ထားပြီး လိုတဲ့ငွေချေးဖို့ ဖြစ်ပါတယ်။
အဲဒီကနေ သူ့ရဲ့ရည်မှန်းချက်အတိုင်း ဖက်ရှင်အဝတ်အထည်တွေရောင်းချတဲ့ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းသစ်တစ်ခု ပြန်စခဲ့ပါတယ်။ နောက်ထပ် ၄ နှစ်အကြာမှာတော့ ဘီလီယံနာတစ်ယောက် ဘဝကို ဒုတိယအကြိမ် ပြန်ရောက်လာခဲ့ပါတယ်။ “ဂျပ်ဖ် ပီယာစီ” ကို ၁၉၉၂ ခုနှစ်မှာ လစ်ဗာပူးလ်က တစ်နှစ်တာအတွက် အကောင်းဆုံး စီးပွားရေးသမားဆု ချီးမြှင့်ခဲ့ပါတယ်။
မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းတွေက သူရဲ့ဘဝအတွေ့အကြုံတွေကို စာအုပ်ထုတ်ဖို့အကြံပေးကြတဲ့အတွက် သူကိုယ်တိုင်ရေးဖို့ ဆုံးဖြတ်ပြီး စာရေး စာဖတ်ပြန်သင်ခဲ့ပါသေးတယ်။ ညနေပိုင်းအတန်းတွေ လိုက်တတ်၊ သီးသန့်ဆရာတွေ ခေါ်ပြီး သင်ကြားခဲ့ပေမယ့် သူ့ရဲ့မွေးရာပါ ရောဂါကြောင့် စာသင်လို့ မရခဲ့ပါဘူး။ နောက်ဆုံးမှာတော့ “Jeff” က သူ့ကိုယ်စား စာရေးပေးမယ့် ရှဲဒိုးစာရေးဆရာတစ်ယောက် ငှားပြီး စာအုပ်ထုတ်ဝေနိုင်ခဲ့ပါတယ်။
“A Pocketful of Holes and Dreams” စာအုပ်ဟာ ထွက်ပြီးပြီးခြင်းမှာတင် ရောင်းအားအကောင်းဆုံး စာအုပ်တစ်အုပ်ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ စာတစ်လုံးမှ မရေးတတ် မဖတ်တတ်ပဲ ဘီလီယံနာတစ်ယောက် ဖြစ်လာအောင် ကြိုးစားနိုင်ခဲ့တဲ့ “Jeff” ဟာ သူ့သမီးနှစ်ယောက်က အိမ်ယာဝင်ပုံပြင်စာအုပ်တွေ ဖတ်ပြခိုင်းတိုင်း အိမ်အောက်ထပ်ကိုဆင်းပြီး မကြာခဏ ငိုခဲ့ရပါတယ်။ သူစာမတတ်တဲ့အကြောင်းကို လင်မယားနှစ်ယောက်စလုံးက သမီးတွေကို မသိစေခဲ့ပါဘူး။
သူ့စာအုပ်ထွက်လာပြီးတဲ့အခါ သမီးတွေက ဖတ်မိသွားပါတယ်။ အဲဒီအခါကျမှ အဖြစ်မှန်အားလုံးကို သိသွားပြီး သူတို့အဖေအတွက် အရမ်းကိုအံ့သြဝမ်းသာ ဂုဏ်ယူမဆုံး ဖြစ်ခဲ့ကြပါတယ်။
“ဂျပ်ဖ် ပီယာစီ” က သူ့လိုမျိုး စာမရေးတတ် မဖတ်တတ်၊ ကိုယ့်နာမည်တောင် စာလုံးမပေါင်းတတ်ဘဲနဲ့ ဘီလီယံနာ ဖြစ်ခဲ့သေးရင် လူတိုင်းမှာ အောင်မြင်ချမ်းသာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ် ဖြစ်လာဖို့အတွက် အခွင့်အရေးရှိပါတယ်၊ အရေးကြီးတာ ရည်းမှန်းချက်ထားဖို့ပဲလိုပါတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။